Wararka | airportbuhodle.com
Isimo Iyo Odayaal Booqday Dhismaha Garoonka Diyaaradaha Buhoodle-(Video)-
– December 19, 2011Posted in: Wararka
Isimada, odayaasha iyo waxgaradka magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa maanta booqasho ku tegay Garoonka Diyaaraha ee xarunta Gobolka Cayn.
mashruuca garoonka diyaaradaha ee laga wado dhinaca bari ee magaalada Buuhoodle.
Waftiga maanta booqday Garoonka Buuhoodle waxaa Hogaaminayey Garaad Cabdilaahi Garaad Soofe, Garaad Saleeban Buraale Aw-Aadan iyo waxgarad kale.
Booqashadan kadibna waxay qurbajoogta deegaanada SSC ugu baaqeen inay si buuxda uga qayb qaataan dhamaystirka garoonka diyaaradaha ee magaalada buuhoodle.
Waxaa Dib u Bilawday Dhismihii Garoonka Diyaaradaha ee Buuhoodle 3 Bilood ka dib
Waxaa maanta dib ubilawday dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada buuhoodle oo in mudo ah haatan uhakaday sababo dhaqaalo aawadood sida ay maanta warbaahinta usheegeen hawl wadeenada gacanta kuhaya dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada buuhoodle. Mar aan saaka booqasho ku tagay dhismaha Gagida diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle ayaa waxay
Waxaa maanta dib ubilawday dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada buuhoodle oo in mudo ah haatan uhakaday sababo dhaqaalo aawadood sida ay maanta warbaahinta usheegeen hawl wadeenada gacanta kuhaya dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada buuhoodle.
Mar aan saaka booqasho ku tagay dhismaha Gagida diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle ayaa waxay indhahaygu qabanayeen gaadiid iyo shaqaale tiro badan kuwaasi oo si dardarleh uga shaqaynayay dhismaha garoonkani diyaaradaha ee magaalada buuhoodle .
Dhismaha gagida diyaaradaha ayaa waxaa laga bilaabay duleedka magaalada Buuhoodle bishii October ee sanadii 2009 wuxuuna haatan soconayaa dhismihiisu mudo sanad ah, waxaana mudadii uu socday dhaqaale laxaad leh ugu deeqay qurbajoogta udhalatay gobolada SSC ee kukala nool daafaha dunida kuwaasi oo inta badan ka shaqeeya horumarinta deegaamada SSC soomaaliya.
Dhismaha garoonkan ayaa wuxuu marayaa meel gabo gabo ah, waxaana lafilayaa in dhawaan la manafacaadsan doono, kaasi oo kamid noqon doona horumarada lataaban karayo ee laga sameeyay gobolada SSC tan iyo intii ay burburtay dawladii dhexe ee soomaaliya.
Dhanka kale Hawl wadeenada ku hawlan dhismaha garoonkan ayaa waxay maanta hambalyo iyo bogaadin udireen dhamaan jaaliyadaha SSC ee kasoo qayb qaatay dhismaha garoonkan, waxaanay ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan sidii loo dhamaytiri lahaa dhismaha garoonkan dhaqaalaha yar ee kadhimana ugu soo deeqaan si,aanu waxqabadkeenu unoqon ( Hal bacaad lagu lisay ).
Iskusoo wada duuboo bulsho waynta ku dhaqan mandaqada SSC ayaa haatan waxaad moodaysaa inay meel ugasoo wada jeesteen horumarinta deegaamadooda, islamarkaana ay garteen aayaha mustaqbalkooda danbe iyagoo markii hore intooda badan lakala safnaa siyaasada danaysiga kusalaysan ee maamulada Garoowe iyo Hargaysa.